पुँजी पुर्याउने उपाय बोनस र हकप्रद, प्राइमले दिनेभो एक अर्ब ७० करोड बोनस – Arthatantra.com
यस्तो छ पोखरेली गायक आजाद ढुंगानाको ‘केही खास’ (भिडियो)
निजामति कर्मचारीले भने विधि र मापदण्ड बनाएर मात्र समायोजन गरौं
विरगंज नाकाबाट मात्रै छ महिनामा ५९ अर्ब राजश्व संकलन
नेपाली र कोरियालीका ३५ कलाकारका चित्र प्रदर्शनीमा
माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार तय
पुँजी पुर्याउने उपाय बोनस र हकप्रद, प्राइमले दिनेभो एक अर्ब ७० करोड बोनस
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पुँजिको सिलिङ भेट्नको लागि बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु यतीबेला बोनस तथा हकप्रद निष्काशनमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश बैङ्क तथा फाईनान्सहरु हकप्रद तथा बोनसको प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् भने कतिपय पारित गर्ने तयारीमा छन् ।
यहि भिडमा मिसिन आईपुगेको छ प्राइम कमर्सियल बैङ्क । प्राइम कमर्सियल बैंकको पुस २५ गते सम्पन्न दशौं बार्षिक साधारण सभाले २७ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस बितरण गरेको छ ।
विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको बैंकले गत वैशाख १७ गतेपछाडि सेयरधनी बनेर बोनस पाउने लगानीकर्तालाई भने लाभांस वापतको कर आफैँ तिनुपर्ने जनाएको छ ।
साधारण सभाका लागि बैंकले पुस ५ गतेदेखि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरेकाले उक्त बोनस पुस ४ गतेसम्म कायम बैंकको सेयरधनीले मात्र पाउनेछन् । ६ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको बोनस बितरण पश्चात ८ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुगेको छ ।
त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीमा मंगलबार सम्पन साधारण सभाले गजेन्द्र विष्टलाई सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरि सञ्चालक नियुक्त गरेको छ ।
विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्स, शिक्षाविद्, एवं व्यवसायीक व्यक्तित्वद्धारा प्रवद्र्धित बैंकले नविनतम सेवा र शाखा सञ्जाल विस्तार गरि समयानुकुल लगानीको प्रतिफल प्रदान गर्दे जाने प्रतिवद्धता समेत साधारणा सभामा गरेको छ ।
२०७४ पुष २७ गते प्रकाशित
के तपाईसंग बैङ्कको सेयर छ ? दिदैछ ४ अर्ब ५७ लाखको बोनस काठमाडौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनी लाई ४ अर्ब ५७ लाख रुपैया बराबरको बोनस […]
सिभिलको ४० प्रतिशत हकप्रद भर्न छुटेको भए चिन्ता नलिनुस, थपियो म्याद काठमाडौं । ४० प्रतिशत हकप्रदमा आवेदन पुस २७ गतेसम्मको सूचना प्रकाशित गरेको सिभिल बैंकले […]
कर्णालीको ३३ करोड ९७ लाखको हकप्रद, कहाँबाट गर्ने खरिद ? काठमाडौ । कर्णाली विकास बैंकले ३३ करोड ९७ लाख रुपैया बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्नको […]
आजै सुरक्षित गर्नुहोस बैङ्कको २ करोड ३५ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद काठमाडौ । प्रभु बैङ्कले निष्कासन गर्न लागेको दश बराबर चार अनुपातमा प्रतिकित्ता एक सय […]
सकियो एसबिआईको विवाद, गर्यो बोनस शेयर र नगद लाभांश दिने प्रस्ताव काठमाडौं। सञ्चालक समिति सदस्य विवाद सुल्झिए संगै नेपाल एसबिआइ बैंकले १५.४२ प्रतिशत बोनस […]